DAAWO: Faroole oo inkiray Wasiirada kasoo jeeda Puntland ee DFS – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Faroole oo inkiray Wasiirada kasoo jeeda Puntland ee DFS
January 14, 2022 Xuseen 22
Madaxweynihii hore ee Puntland ahna Senator kamid ah Golaha Aqalka Sare ee BJFS Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole, ayaa inkiray Wasiirada kasoo jeeda deegaanada Puntland ee kamid ah Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Faroole oo ka hadlayay magaalada Qardho ayaa sheegay in Puntland ay DFS ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ay ku leedahay hal Wasiir oo kali ah (Wasiirka Arrimaha Dibadda), kaas oo hotelada uu degayo u sii qabta Madaxweynaha marka uu baxayo.
Waxaa uu Faroole inkiray Wasiirada Qorsheynta, Kalluumeysiga, Duulista Hawada iyo Beeraha, oo kasoo jeeda deegaanada Puntland, kuna matala saami qeybsiga beelaha Puntland.
FAROOLE ma dafirin wasiiradaas waxa uu ka hadlay PUTLAYN, waana wasiirka kaliya ee kaga jira beesha MAJEERTEEN ee PUTLAYN iska leh Alla ka sokow…
saas ma ahan ee farole waxuu kawadaa wasiiradaas dan puntland kama shaqeyaan oo kacanka farmajo ay u shaqeyaan
Farole waxba ma qariyo kkkk wasiirka ugu roon oo puntland ka soo jeeda farmajo u hotelada u sii kireyaa markii uu safar dibada uu adayo u dhahay,3 wasiir oo kale e puntland ka soo jeedana waa guulwadayaal farmaajo ayuu leeyahay
waa kala labo hadii uu odhan lahaa wasiirada puntland ku metela DFS wax dan ah uma hayaan deegaankooda marka laga reebo wasiir hebel. waa hadal cad oo la fahmi karo waxayse u eg tahay inuu yidhi puntland = majeerteen xiliganse ka dib intii aadka laysu fahmey cid ceeb taas qudheeda u aragta ma jirto. ninka arintaas ugu cadhooda faroole iyo qeyrkiisba waa nin aan habeen jirin.
Faroole wuxuu ku qurux badnaan lahaa isaga iyo Inta la dada ah in ay retire garoobaan.
Fahamkayga hadalkiisu waa intii Majeerteen lagu kicin jiray un ee ahaa Mareexaan aan mucaaradno.
Dawalad Majeerteen hogaamiyo horta dalka iyo dadka waxaan Majeerteen ahayn oo ay Somalinimo ama qaraabanimo wax ugu qabteen miyaa jirta?
Majeerteen inta aanay cidna mucaaradin oo meelaha gafuurka tuurin iyaga marka xafiiska ay joogaan dadka ha aruuriyeen.
AU Col Abdillahi Yusuf baa laga sheegay nimanyahow dagaal xun baan idinla galay ee ila shaqeeya ilma addeerayaalow.
WAXAAN KUU BALAN QAADAYNAA SIDAADII IN AAN BALAAYADA KALE KUUGU SOO HOR MARIN.WAANA LAGA SHABEEYAY.
Gaas ayaa loo tagay wuxuu yiri sow ma ogodin in ay SSDF dhiigayga ku jirto.
Cumar ayaa loo tagay.kkkk aniga Daarood ma matalo, haye Majeerteen Maxamud Saleebaan maba dhaafsani.
Addeer Faroole waa iska waayeel warkiisu wuu macno beelay.
Faroole waa saxan yahay Puntland waa Old Majeeerteeniya.
Faroole ma runtaa lagu eedaynayaa??? Puntland Majeerteen ayaa leh oo xukuma, marka laga reebo in yar oo waxoogay qadhiidha/sadaqo ah loo tuuro marka kuraasta baarlamaanka Xamar laga saxeexanayo. Waad ogtihiin meeshuu Dhoobo-daareed maray & sida Axmed Karaash loogu yidhi, kursiga edeb ku fadhi, iska qayil, afkaagana hayso.!kkk kkk kkk
Pultlandi Dhab ah qofka aan marna qadiyada shaki galin xaalad lasta oo timada Lkn ninka markii in la qolo ah la taabto oranaya Puntland waa ka baxay Puntlander run ah ma aha.
MJ 100% waxay aminsan yihiin lkn nin marna Hargaysa marna Xamar qadiyadu dhab kama aha ee marks hore ukumihiisa Hal basket ku rida (Puntland) markaas cid kaa xigta ma jirto.
Warkan xaqiiqadiisa yaa og, illayn muuqaal uu sidaas uhadlayo lama sooraacinin e?
Kuwiinnan iska burqadayse, weedhii soo yeedhaba ma iskaga soo boodeysan idinka oo aan waxba kala hubsanin?
Muuqaalka bugan aad wax ku qoraysuu ku jiraa, hadaanad arki karin dhegayso!!!
Waxaa hada kahor sheekaysanay Foroole nin ay aad iskugu dhowyihiin laf dhabarna u ahaa campaignkiisii. Wuxuu yiri Foroole waxaa ka kari waynay war kor fiiri oo harti oo dhan hogaan u noqo. Dawlad deegaankaa lala kulmay wuxuu kala hadalay xaq beelo majeerteena kamaqan taasoo aan ajandabaha kujidhin.
Odaygu waa hogganka majeerteen u haray. Siyaasada haka baxo, isinka guudna haloogu caana shubo.
Dad caddaalad waayaa sidii cawsha kala yaac!
Waar odayga Faroole ah maxaa laga rabaa maantay? Waar dee odaygu waa oday Soomaaliyeed, wax kale oo uu dhimay majidho. Waxaa intaa dheer, Faroole markii uu Boosaaso joogay waxa uu ahaa MJ; markan uu Qardho ka hadlayana waa MS; marka uu Garoowe & geedkii timirta lahaa ku noqdana waa CM.
Kasoo qaad in uu odaygu u hadlayo majeerteen—- tasoo uu ku saxsanyaha.
Laakiin waxaan Oday faroole dhihi lahaa “adeer ha u baroran boos uu awalba buuxin lahaa will xamar ku dhashay ama ku barbaaray oo aan aqoon wax aan ahayn NOOH”.
Axsan in aad u halgantid laxdii ku dhalatay biyo-Badane si ay booskaas u buuxiso.
Waxaan cudurada dhimirka ee waayeelka ku dhaco ayuu qabaa ee maa la fariisiiyo ama irbad euthanasia lagu duro.waa na dhibeen qolfooyada maskaxda maran.
@@Yoocada ala Laalays,
Saaxiib, ma cawarni e waxaa muuqaalka iga ‘block’-gareeyay antiviruskayga khatarta ah ee difaaca adag iigu jira! Kolley wax buu ka qoonsaday.
Adiguse, waad ogtahay in Somaliland Habar Awashu leedahay oo intooda kale ay magan uga yihiin. Waana la ogyahay afooyinka ay jeegaantu Habar Yoonista u geysatay iyo sida ay Habar Yoonistu weli iskaga dugsato dhib kasta oo ay kuqabaan.
Fiqi tolkii kama jannatego maandhe. Calal-aqal masiibooyinka Isaaqa kala gaaray Hartiga iyo Daaroodka cindigooda waa ka mustaxiil oo walaalnimadu waa mid sugan oo aan la isu soodhaafi karin.
Sawaaxiligu waxay kumaahmaaheen ‘NYANI HAONI KUNDULE’, fasirkeedana waa ‘home-work’ adiga meel kuuyaalla.
Oday Faroole Waxaa la yiraahdaa qarxiye!
Hadda ka hor buu asagoo Puntland Madaxweyne ka ah ka degay Muqdisho oo aay ugu dambeeysey 91kii markii uu ka qaxay!
Saa kuye, war Magaaladan iyadoo dhisan oo qurxaan baa ka tagnaye yaa sidaan u galay?! Kkk
Markaasay beesha Hawiye wada xanaaqday! Kkk
Shalayna Waxaan arkayey asagoo ina C/rashiid ku riday rasaas xanuun badan oo ninkii oo suuxsan haddana Cismaan Max’uud ku dacweeynaya! Kkk
Kuye, wuxuu na yiri Gabar baa Hotel igu sugeeysa ee hawsha sii wada! Kkk
Faroolow Geedkaadii Timirta ahaa ku sug reer Puntland iyo cid kasta oo aad fahmi waayso! Kkk
Alxaji maanta waan qoslay waxaad ku dhigtay “CALI WARANCADE” exactly meesha uu ka soo post gareeyey niicdiisa waa gurigiisa.
War ileen adaa balaayo arkay” Waxaan ka marag ahay inaad Homework u dirtay Saqajan WARANCADE” Miyeysan ogeyn SNM in Daarood soo jeedo maanta oo la marayo 2022 xiligii URUR SAMAALE IYO SHAATIGA SHAYDAAN KA Gabalkoodii dhacay. Shidadooda dhinac hanagala maraan xabaalahooda ha iska quftaan Uk 🇬🇧 lacag ha oga raadsadaan. Xiligii Faroole ee xiskisinka iyo Luqmada lama joogo CAAC ina WARANCADE waxay ka tahay Faroole difaac waxaa u roobeyd inuu magaciisa caadigaa soo qaato ee inuusan hadba magac soo qaato hadana gurigiisa ka soo post gareeyo yaah odayadii SNM baa weerer ah QAAQ HALAKAN FADHI KU DIRIR KU WADA AH FUCK OFF.
Faroole Farmaajo buu karbaashayaa Farmaajo in la jarbaasho wuu istaahilaa “Bal eega WAXA UU umada horkeenay Dhuusa mareeb baa wax kaa celin karta oo Galmudug isla tihiin maxaa ka raacay waa isagii odayada ka xunbuq xunbuq siiyey Laaxowla walaa quwata ilaa bilaahil caliyil cadiim muxuu yiri “WALAALEHEEN EMARATES WAA NOO BILAABEEN DUF ALAAH KU BED GAAJADA HAYSAA WAYNAA? Waxaan ka xumahay sidaan u buun buuninay ilaahow naga cafi oo noo danbi dhaaf waa nin shaqeysta, Ehlu diin ah hadaa habar gidir nin u soo baxay. Istaqfurullah kulu danbi.
Habar gidir Waxa xun baa ilaahay la maagay oo ku faanaan. Taariikh dhab ah oo dhacday 1993 dii ayaa Mujrimkii ina CIGAAL iyo Mohamed Abshir waxaa dhexmaray Dagaal afka ah Djibouti Anaa madaxweyne somaliyeed noqonaya iyo cirku intuu kuu jiro bay kuu jirtaa “Kaftan baa loo qabay “Ma anoo Habar gidir gacanta iigu jirto 30 Sano baa inoo balan ah baa laga hayaa Mujrimkii ina Egal” Afar bilood Kama soo wareegin markay Mujrimka Habar Gidir Shaatiga shaydaan ka u soo geshay mujrimkii ina Egaal oo inta SNM tii isdileysay qaar u soo diray inay soo raacaan iyaka iyo hubkooda Mujrimka Habar gidir ee Hassan Dahir aweys soo dhex istaajiyey Bossaso Deqa isagoo hubaysan. “BILAABASHADA MASHRUUCAN ALSHAYDAAN EE HARGEYSA” Bal eega maanta waa 2022 29 Sano ka bacdi taariikh du iyadaa isqorta. Meelahan ka arkayey kuwa dhahaya ROOBLE BAAHANE WAXAAN LA YAABAY SIDAY UGU SUGEEN MAGACAAS HEHEHE INAA LILAAHI WA INAA ILAAHAY RAAJICUUN DUF KU BAX. War ma ninka 90 bari sum cad ku dhisan waayey oo dadban qaban waayey doorasho lagu qaban karay 30 bari gudahood “MAXAAN XADAA? MAXAAN CUNAA? SEE KU JOOGAA? Finally lacagtii Contraband KA Munaafaqiinta Emarates ka baa u bidhantay TUUG. Waxay u egtahay in mar labaad dowladnimada umada somaliyeed Habar Gidir iyo Marehan god ku ridi doonan.
Anagu hadaan Reer PUNTLAND nahay Somalia 🇸🇴 WAAJIBKII IYO BALANKII ODANADII QAADEEN EE IN DOWLAD NIMADII UMADA SOMALIYEED EE SNM IYO USC CEELKA KU RIDEEN AY KA SOO SAARAAN WAA GUULEYSTAY ILAAHAY BAA NA OO NA UUNTAYE BALANKOODII WAA GUULEYSTAY LAMANA XAQIRI KARO OO WAA TAARIIKH QORAN OO MAANTA WAA TAA LA HEYSTO FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA 🇸🇴 THEY DID THEIR DUTY HONORABLY” Anakuna balanteynu qaadnay waa balan INAYNU ka soo baxno nafsi saarno puntland kana xisaabtano 1981-1993 waa balan aynu qaadnay SNM iyo USC ama urur samaale ama Alshaydaan tabeelaha baa inoo balan ah. Waxba mareegtadan iyo kuwa la midka ah Cali warancade iyo Faisal fataal iyo kuwa la midka ah hadba shaati soo bedesha anana waxaa balan inaan idin ka feydo shati shaydaan kasta ee aad soo xirataan Falacnatullahi SNM USC IYO ALSHAYDAAN ISHUWAN.
Ninyahow caadifad baa ku haysa! Dadka dhintay inaad ku rafatid wax wanaagsan maahan, Cigaal (AUN) wuu dhintay, ilaahaygii abuurtay baana xisaabinaya.
Nin waxbadan yaqaan uma muuqadatid, waxaan hubaa in Cigaal kawadani sanaa inta badan siyaasiyiinta Daaroodka. Ficilada qaar waxa marxuumka ku kalifay waa damac waaliya oo siyaasiyiinta daarood ku wax ku doonayaan.
Faroole waxba ma qariyo, runta sida ay tahay ayuu u sheegaaa.
Faroole is the man Hal wasiir oo protocol hhhh
Faroole wuxu dib u qeexay Puntland(Majeerteeniya.
Majeerteen in lagu koobo manaasibta maamulkaas waa xalka sii jiritaanka maamulkaas,lagana saaro reer Somaliland.
Hadda Majeerteen ayaa isku cakiran,wax weyn ayayna ka taraysaa saami cadaalad ah oo Majeerteen dhexdiisa arrintaas waxana u baaqanaya manaasib lagu qanciyo kuwa wax tabanaya.
17 + 9 = 26 xildhibaan
Intaas oo wasiir,wasiir xigeen,agaasime,booska Karaash.
TALADA FAROOLE waa badbaadada Majeerteeniya.
Markay dhisanayeen 1998 Puntland waxay ku qanacsanaayeen in Bari,Nugaal,Mudug maamul loo dhiso,balse siyaasiyiin Harti Somaliland ah ayaa si kale wax u tusay,yidhina nagu dara,iyagoo u hamuun qaba manaasib,balse arrintaas waxay caqabad bay noqotay keeni karta kala tag Mj dhexdiisii ah.